मौसम परिवर्तनले प्रवासी चराहरूको अस्तित्वलाई असर गर्छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम परिवर्तनले प्रवासी चराहरूको अस्तित्वलाई असर गर्छ
मौसम परिवर्तनले परिवर्तन गर्दैछ धेरै प्रवासी चराहरू को प्रवास पैटर्न। इकोसिस्टमको तापमानमा परिवर्तन, inतुहरूमा उन्नति, आदि। तिनीहरूले चराहरूलाई तिनीहरूको आन्दोलन परिवर्तन गर्न कारण।
या त प्रगति, ढिलाइ वा अवधिमा आधारित यी आप्रवासी परिवर्तनहरूले केही प्रजातिहरूको अस्तित्वका लागि गम्भीर परिणामहरू लिन सक्दछ। किन यस्तो भइरहेको छ?
1 माइग्रेसन बान्कीमा परिवर्तनहरू
2 प्रवासी चराहरू र मौसम परिवर्तन
3 माइग्रेसन र दिगो विकास मा परिवर्तन
माइग्रेसन बान्कीमा परिवर्तनहरू
मौसम परिवर्तनले विश्वका धेरै भागहरूमा वसन्त अगाडि ल्याउँछ। यसैले चराहरूले आफ्नो प्रवासी यात्रा हप्ताहरू अघि नै गरे, किनकि उनीहरूले महसुस गरे कि तापक्रम पहिलेभन्दा बढी रमाइलो छ र बाँच्नको लागि सक्षम हुन र आफ्नो प्रजनन काल सुरू गर्न।
एउटा अध्ययन गरिएको छ जुन चराहरूको प्रवासी पैटर्नमा परिवर्तनहरू विश्लेषण गर्दछ र त्यसले कसरी तिनीहरूको अस्तित्वलाई असर गर्न सक्छ। यो अध्ययनले देखाउँदछ संसारभरि रहेका प्रवासी चराहरूको १, .०० प्रजातिहरूको १%% लोप हुने खतरामा छ। सब भन्दा स्पष्ट कारणहरू हुन्: अवैध शिकार, आवासको घाटा र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव।
हामीले बिर्सनु हुँदैन कि मानव प्राकृतिक वातावरणमा परिमार्जनले खतरामा पार्छ र यी प्रवासी चरा प्रजातिहरूको बासस्थानलाई नष्ट गर्दछ। प्रजनन चराहरु आफ्नो प्रजनन र foraging को लागी उपयुक्त स्थानहरु को लागी यात्रा गर्न को लागी यात्रा गर्नु पर्छ।
संसारभरि १०,००० चराहरूका प्रजातिहरू छन् र ती मध्ये १,10.000०० ती हुन् जुन यात्रा गर्न आवश्यक छ र यसैले आप्रवासी हो। यी तथ्या birds्कहरू यी चराहरू र उनीहरूको वासस्थानको सुरक्षाको आवश्यकताको बारेमा शिक्षा र सार्वजनिक जागरूकतालाई प्रोत्साहित गर्नको लागि हो।
प्रवासी चराहरू र मौसम परिवर्तन
मैले माथि भनें, जलवायु परिवर्तनले बढ्दो तापमान र बढ्दो मौसमहरूको कारण गर्दछ। यसैले यसले चराहरूको धेरै प्रजातिहरूलाई उनीहरूको प्रवासी फेनोलोजी परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको छ। यसले उनीहरूको प्रजनन मैदानहरू परिवर्तन गर्न बाध्य गर्दछ, अन्य प्रजातिहरू जाडोको मौसम परिवर्तन गर्न र अन्यहरू आफ्नो प्रवास अवधि छोट्याउन। अन्ततः यी परिवर्तनहरू राख्दैछन् धेरै प्रवासी प्रजातिहरूको अस्तित्व खतरामा छ।
यद्यपि चराहरूको व्यवहार परिवर्तनको नकरात्मक प्रभाव पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन, नतिजा स्पष्ट छ। धेरै चोटि यी परिवर्तनहरूको अर्थ चराहरूले आफ्नो जीवन चक्रलाई उनीहरूले खानेकुरासँग जोड्दैनन्। यसले समस्या पैदा गर्न सक्छ जब यो राम्रो वा नराम्रो प्रजनन सफलताको लागि आउँछ।
यो अवस्था झन गम्भीर बन्छ र चराहरूका लागि बढी नकरात्मक नतिजाको साथ हुन्छन्, जस्तै निगलजस्ता, जसले उनीहरूको प्रवास अवधिलाई छोट्याउँदछन्। यो छोटो पार्ने मौसम थोरै मौसमको कारण हो र मौसम परिवर्तनले चराहरूको सम्पूर्ण जैविक श्रृंखलालाई असर गर्छ, किनकि चराहरूलाई खुवाउने चराहरू पनि आफ्नो शिकार बान्की बदल्न बाध्य छन्।
माइग्रेसन र दिगो विकास मा परिवर्तन
दुबै प्रवासी र गैर-प्रवासी पक्षीहरूको दिगो विकास र राम्रो संरक्षणलाई प्रबर्द्धन गर्न, मानव र प्रकृति बिचको सम्बन्धलाई सहयोग गर्ने जागरूकतालाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरियो ताकि चराहरू राम्ररी संरक्षित रहन सक्दछ किनकि हामी एक ही ग्रह साझा गर्छौं र उही सीमित संसाधनहरू। यसले प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिन कोशिश गर्दछ। चराहरूको भलाइ र मानवताको भविष्यका लागि।
हामीले यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि चराहरूको लागि प्रवास एक धेरै खतरनाक यात्रा हो र यसले ती जनावरहरूलाई पर्दाफाश गर्दछ जुन धेरै खतराहरूको लागि बनाउँदछ। ती धेरै खतराहरू छन् ती मानवीय गतिविधिहरूका कारण हुन्। त्यसकारण चराको प्रवासी मार्गहरू सुनिश्चित गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था र पक्षीहरूको संरक्षणमा रुचि राख्ने सबैको तर्फबाट ठूलो प्रयास आवश्यक छ। यस तरिकाले तिनीहरूले यात्रामा न्यूनतम प्रभाव पार्नेछ र हामी उनीहरूको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मौसम परिवर्तनले प्रवासी चराहरूको अस्तित्वलाई असर गर्छ
२०२1,5 मा पृथ्वीले तापमानको १. 2026 डिग्री पार गर्न सक्दछ
स्विजरल्याण्ड ग्लोबल वार्मिंगबाट एक हिमनदी बचाउन चाहन्छ